Mmeghe nke ụlọ ọrụ ikike abụọ nke DJI nyere ikike na Spain | Akụkọ akụrụngwa
Mmeghe nke ụlọ ọrụ gọọmentị nke abụọ nyere ikike ka ụlọ ahịa DJI dị na Spain
DJI bụ ụlọ ọrụ kachasị na imepụta na ọrịre nke drones obodo na teknụzụ onyonyo ikuku. Anyị ji n'aka na anyị niile maara otu ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị anwalela ya ma ọ bụ na anyị nwere otu n'ụlọ. Eziokwu bụ na DJI bụ ụlọ ọrụ na-arụpụta drones kacha mma maka ndị ọrụ.
N'okwu a, ụlọ ahịa ọhụrụ enyere ikike na Madrid ga-emeghe ọnụ ụzọ ya Satọdee na-esote, Disemba 2, 2017 na elekere 12:00 nke ehihie, ụlọ ahịa ahụ ga-abụ onye ọrụ gọọmentị nke abụọ anyị nwere na Spain ma ọ ga-ekwe omume ịme ihe maka ndị ahịa nke drones ha yana ebe obibi na nkuzi iji meziwanye ahụmịhe na ngwa ikuku ndị a na-enye ohere ịnweta ikuku. ihe oyiyi.
Storelọ ahịa ọhụrụ ahụ bụ ihe dịka square mita 70 ma dị emi odude ke Calle Mónaco, 30, 28232 ke Las Rozas, Madrid. N'ime ya ị nwere ike ịzụta ma ngwaahịa nke ika a ma ama dịka DJI Mavic Platinum, DJI Phantom 4 Pro Obsidian ma ọ bụ DJI Spark na-adịbeghị anya, obere mmiri dị mfe iji mee ihe na-agbakwunye igwefoto na ọkwa nke DJI niile na-ekwe ka ndekọ. ihe nkiri pụrụ iche sitere n'ikuku. Anyị ga-ahụkwa ngwaahịa ejiri aka dịka DJI Osmo usoro ma ọ bụ akụrụngwa maka ndị ọkachamara cinematographers na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa, yana usoro Drone Inspire 2, Zenmuse na Matrice kachasị ọhụrụ.
Na ememme nke nnukwu oghere ọrụ, a ga-enwe usoro ihe omume na mmemme na Satọdee, Disemba 2, gụnyere:
Bụrụ otu n'ime ndị ahịa mbụ n'oge nnabata nnukwu ma nweta ego 10% -12% maka ngwaahịa ahọpụtara.
Bụrụ otu n'ime ndị ọbịa 20 mbụ wee nweta akwụkwọ ikike ruru EUR 50 ma ọ bụ EUR 20
Tinye raffle n'oge Nnukwu Mmeghe maka ohere iji merie DJI Mavic Pro, DJI Spark, ma ọ bụ otu n'ime atọ DJI Osmo Mobile. A ga-ekwuputa onye mmeri na 18: 00 pm n'ụbọchị nke Nnukwu Mmeghe.
Ohere ịzụta Spark mini drone na ngwaahịa, DJI Mavic Pro Platinum na DJI Phantom 4 Pro Obsidian
N'ime ụbọchị niile, a ga-enwe ọtụtụ onyinye na ngosipụta ngwaahịa
Na mgbakwunye na ndị ọrụ tozuru etozu, ụlọ ọrụ ga-enwe ike isonye na ogbako ndị a na ọ bụ na ịnabata teknụzụ ikuku a maka azụmaahịa bụ usoro dị ugbu a n'oge a, ma maka ọrụ ugbo, nyocha, nyocha nke nnukwu ebe ma ọ bụ maka ụlọ ihe nkiri. . A ọhụrụ ụlọ ahịa DJI nyere ikike ire ere adabara onye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Mmeghe nke ụlọ ọrụ gọọmentị nke abụọ nyere ikike ka ụlọ ahịa DJI dị na Spain
Windows chọrọ AirDrop nke ya n’etiti iOS na PC
Microsoft Office dị ugbu a maka Chromebook